धुर्मुस/सुन्तलीले निर्माण गरिरहेको क्रिकेट रंगशाला किन भत्काए स्थानियले ? (भिडियो सहित्) «
धुर्मुस/सुन्तलीले निर्माण गरिरहेको क्रिकेट रंगशाला किन भत्काए स्थानियले ? (भिडियो सहित्)
प्रकाशित मिति : १५ जेष्ठ २०७६, बुधबार २०:३७
चितवनमा धुर्मुस सुन्तलीद्धारा निर्माण भैरहेको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला स्थानीयले भत्काएका छन्।
स्थानियले बुधबार बिहान रंगशालाको बार र संरचना भत्काइएको हो । रामपुर कृषि क्याम्पसका लागि अधिग्रहण गरेको जग्गामा क्रिकेट रंगशाला निर्माण गर्न थालेपछि विवाद भएको थियो।
धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनले चितवनमा निर्माण गर्न लागेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला निर्माण स्थालमा लगाइएको तारबारमा बुधबार डोजर चलाइएको छ।
बाटोको माग गर्दै रंगशाला निर्माणका लागि प्राप्त जग्गामा लगाइएको बारमा डोजर चलाइएको हो। फाउण्डेशनका अध्यक्ष कलाकार सीताराम कट्टेल (धुर्मुस)ले राजनीतिक आडमा नियोजित हिसाबमा डोजर लगाइएको आरोप लगाएका छन्।
भरतपुर नगरपालिका–१५ रामपुरमा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणका लागि अहिले सहयोग जुनाउने काम भइरहेको छ। २० बिघा ६ कट्ठा जग्गामा बन्ने रंगशालाको अहिले डिजाइनको काम भइरहेको र अहिलेसम्म रंगशाला निर्माणका लागि साढे पाँच करोडभन्दा बढी रकम सहयोगबापत प्राप्त भइसकेको छ।
तर बुधबार रंगशाला निर्माण स्थालमा डोजर चलेपछि कट्टेलले दु:ख व्यक्त गरेका छन्। रंगशाला निर्माण स्थालमा गएर अवलोकन गरेपछि उनले दिएको प्रतिक्रिया यस्तो छ-
हामी सहनसिल छौं। हामी नकारात्मक कुरा बाहिर नजाओस भनेर पटकपटक उहाँहरुलाई सम्झाइरहेका हुन्थ्यौं। सम्झाउदा पनि जुन प्रहार भएको छ। अन्त्यतै दुखद् प्रहार भएको छ। न हामी हाम्रा लागि हिँडेका हौं। न हामी आफ्नो स्वार्थका लागि हिडेका हौं। आफ्नो पेशा घर परिवार सब चिज त्यागेर सिंगो देश र देशवासीको खुसीका लागि हिडिरहदा जुन प्रकारले प्रहार भएको छ। -नेपाललाइभबाट